Caribbean Airlines dia manafatra fiaramanidina Boeing 12 MAX 737 miisa 8
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Caribbean Airlines dia manafatra fiaramanidina Boeing 12 MAX 737 miisa 8
Nanambara i Boeing sy Caribbean Airlines androany fa nifidy ny hanatsara sy hanavao ny fiaramanidina tokana misy azy ny fiaramanidina 737 MAX 8. Ilay mpitatitra, izay efa ela no niasa ny Next-Generation 737, dia handray fiaramanidina MAX 12 amin'ny taona ho avy.
Nahatsiaro ny fifantenana ny MAX ny kaompaniam-pitaterana nandritra ny lanonana iray ahitana ny olona ambony, toa ny praiminisitra Trinidad sy Tobago, Honorable Keith Rowley, ary ny Lehiben'ny Executive Executive Caribbean Airlines, Garvin Medera.
“Teo akaikinay ny Boeing hatramin'ny nanorenan'i Caribbean Airlines roa ambin'ny folo taona lasa izay, tamin'ny alàlan'ny 737-800. Ny 737 MAX dia mamela antsika hanohy hanolotra traikefa azo antoka sy ahazoana aina ho an'ireo mpandeha, sady manatsara ny fahombiazan'ny solika sy ny fahombiazan'ny tontolo iainana, "hoy i Medera. "Ireo singa rehetra ireo dia mametraka antsika hahita fahombiazana maharitra."
Ny 737 MAX 8 - ampahan'ny fianakavian'ny fiaramanidina mahomby solika - dia hipetraka hatramin'ny 160 amin'ireo mpandahatra laharana telo an'ny Caribbean Airlines misy ny Cabin an'ny "Caribbean Plus", ary hanome maherin'ny 500 kilometatra maro hafa lavitra noho ireo fiaramanidina efa misy .
Ny fiaramanidina dia mampiditra ny maotera farany CFM Iraisam-pirenena LEAP-1B motera, Advanced Technology winglets, ary fanatsarana airframe hafa hanatsarana ny zava-bita ary hampihena ny vidin'ny asa. Tetikasa Caribbean Airlines ny MAX 8 dia hanome tahiry hetra hatramin'ny 16 isan-jato raha oharina amin'ireo andian-tsambo misy azy ankehitriny.
Ny MAX, miaraka amin'ny Boeing Sky Interior malaza ary natao mangina kokoa noho ny fiaramanidina teo aloha, dia hanolotra ny mpanjifa any Karaiba ny fihenan'ny mpandeha.
"Voninahitra izahay fa nametraka ny fitokisany indray tamin'ny fianakavian'i Boeing fiaramanidina Boeing ary nidina hifidy amin'ny ho avy miaraka amin'ny 737 MAX 8. Ny safidiny dia manamafy ny fiaraha-miasa izay namboarinay niaraka tamin'ny fianakaviana Next-Generation 737," hoy izy. Ihssane Mounir, filoha lefitra zon'ny Sales Sales & Marketing an'ny orinasa Boeing.
Ho fanampin'ny sidina Boeing manidina, Caribbean Airlines koa dia mampiasa ny serivisy Boeing hanatsarana ny asany. Ny mpitatitra dia mandray anjara amin'ny Fuel Dashboard Program, ohatra, izay ahafahan'ny mpandraharaha mijery manerana ny fiaramanidiny sy mamantatra ny tahiry solika. Karaiba ihany koa dia mampiasa serivisy ara-pitaovana lafo vidy sy lafo vidy i Boeing mba hahazoana antoka fa manana ny kojakoja ilainy rehefa ilainy izany.
Ny birao fizahan-tany any Seychelles dia niara-niasa tamin'ny Air Seychelles tamin'ny fiofanana ho amin'ny toeran-tsoa sy ny antso momba ny varotra
Ireo mpamatsy fitsangatsanganana vondrona dia ekena sy omena